Maraykanka, 01 January 2018
Qabow daran oo fara ba'an ku haya Mareykanka
Mid ka mid ah qabowgi ugu xumaa muddo sannado ah ayaa todobaadkan garaacay gobollada waqooy iyo qeybo ka mid ah bari dalkan Mareykanka.
Mareykanka oo Cambaareeyay Xuutiyiinta Yemen
Dowlada Mareykanka ayaa si kulul u cambaareysay gantaal nuuca riddada dheer oo ay Xuutiyiinta Yemen todobaadkan ku rideen magaalada Riyad ee caasimada Sacuudiga.
Aqalka Wakiilada Mareykanka oo u Codeynaya Sharciga Canshuuraha
Aqalka wakiilada ee Kongareesyska Mareykanka ayaa maanta oo Talaada ah u codeyn doona sharciga canshuuraha ee ku kacaya $1.5ta trillion ee ay hidisihiisu leeyihiin mudanaaysha xisbiga Jamhuuriga.
Saraakiil: Ninkii fuliyey qaraxa New York waxaa dhiiri geliyey ISIS
Saraakiisha booliska New York ayaa sheegay in ninkii fuliyey qaraxii fashilmay ee shalay ka dhacay magaaladaas uu internet-ka ka daawaday muuqaalo borobogaando ah oo ay sameysay kooxda Daacish.
Qarax ayaa ka dhacay boosteejada Port Authority ee degmada Manhattan ee magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Booliska magaalada New York ayaa sheegay in ay xireen nin looga shakisanyahay inuu ka danbeeyay qaraxa.
Trump oo maanta Jerusalem u aqoonsanaya caasimadda Israel
Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu maanta ku dhawaaqo in Mareykanka uu Jerusalem u aqoonsan yahay caasimadda Israel, wuxuuna safaaradda Mareykanka kasoo rari doonaa Tel Aviv.
Trump "Flynn si aan caddaalad ahayn ayaa loola dhaqmay"
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in baarayaasha faro-gelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka ay si aan caddaalad ahayn ula dhaqmeen la-taliyiihiisii hore ee amniga qaranka Michael Flynn.